Atụmatụ nkuzi: Mmekọahụ - Regwọ Ọrụ --gwọ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Atụmatụ nkuzi n'efu Ihe nkuzi: sexting
Atụmatụ nkuzi: Mmekọahụ
Akụkụ pụrụ iche nke nkuzi wardgwọ isgwọ isgwọ bụ ilekwasị anya na ọrụ ụbụrụ nwa. Nke a kachasị mma na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịghọta ma wulite obi ike na nsogbu ọ bụla sitere na iji ihe nkiri na ihe ndị gba ọtọ. Collegelọ Ọrụ Royal nke General Practitioners kwadoro na Regwọ Foundationgwọ Foundationgwọ ahụ na London iji kụziere ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ahụike na ahụike.
Ihe omumu anyi na-agbaso ohuru nke Ngalaba Mmụta nke (gọọmentị UK) "Mmekọrịta Mmụta, Mmekọrịta na Mmụta Mmekọahụ (RSE) na Mmụta Ahụike" ntuziaka nke iwu. Ederede nke Scottish kwekọrọ na Usoro Ọmụmụ maka Ọdịmma.
Enwere ike iji ha dịka nkuzi naanị ha ma ọ bụ atọ. Ihe nkuzi ọ bụla nwere setịpụrụ slide PowerPoint gbakwunyere Nkuzi Onye Nkuzi ma, ebe o kwesịrị ekwesị, ngwugwu na akwụkwọ ọrụ. Ihe omumu a biara na vidio agbakwunyere, ihe ndi ozo na nyocha ndi ozo na ihe ndi ozo maka ighota nke oma iji mee ka nkeji di iche iche, bara uru ma nwekwaa onwe gi.
Okwu Mmalite nke Mmekọahụ
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ụbụrụ nwa
Sexting, Iwu na Gị **
** Maka ụmụ akwụkwọ na England na Wales dabere na iwu nke England na Wales; dịkwa maka ụmụ akwụkwọ na Scotland dabere na iwu Scots.
Ihe ọmụmụ 1: Okwu Mmalite nke Mmekọahụ
Gịnị bụ foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, ma ọ bụ ihe nkiri mmekọahụ nke ndị ntorobịa mepụtara? Upmụ akwụkwọ na-eche ihe kpatara mmadụ ga-eji rịọ ma zipu foto onwe ya. Ha na-atụle ihe ize ndụ ndị dị n’ịdị n’ịdị agụụ mmekọahụ na inwe mmekọahụ n’onwe ha. Ihe ọmụmụ a na-elekwa anya etu ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ si emetụta mmekọahụ na iyi egwu mmekọahụ.
Ọ na-enye ozi gbasara otu esi echebe onwe ha pụọ ​​na mmekpa ahụ achọghị na ebe ị ga-ahụ ntanetị, ihe ndị ntorobịa lebara anya iji mụtakwuo.
Upmụ akwụkwọ na-amụta otu esi ewepụ ihe onyonyo nke mmekọahụ na ịntanetị.
Mbipụta nke Scottish
Ihe Ọmụmụ nke 2: Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, na ụbụrụ nke na-eto eto
Ihe nkuzi a na - ele ụbụrụ ụbụrụ dị egwu. Ọ na-akọwa ihe kpatara neuroscientists ji sị, "N'ime ihe niile a na-eme na ịntanetị, porn nwere ike ị becomeụ ọgwụ ike". Olee otú o si emetụta mmekọahụ?
Upmụ akwụkwọ na-amụta otu esi eme ịntanetị dị ka porn, mgbasa ozi mmekọrịta, egwuregwu, ịgba chaa chaa wdg. Bụ 'supernormal stimuli' nke na-enwe obi ụtọ karịa ihe ọ bụla.
Ego ole ka egwu kariri? Kedu nsogbu ahụike na nke anụ ahụ ọ nwere ike ibute? Mmetụta dị a doesaa ka ọ nwere na inweta ma ọ bụ na mmekọrịta?
Upmụ akwụkwọ na-amụta etu ụbụrụ ga-esi mụta igosipụta njide onwe onye, ​​ịhazi onwe ya na usoro dị iche iche ga-esi nweta ya. Ha na-achọpụta banyere ihe onwunwe iji nyere ha aka ịmara nke ọma ma nwee ike ịme nhọrọ dị mma.
Ihe Ọmụmụ nke 3: Mmekọahụ, Iwu, na Gị
Mmekọahụ abụghị okwu iwu, mana o nwere ezigbo nsonaazụ iwu. Ọ bụ ihe megidere iwu ụmụaka ka ha mee, ziga ma nata onyonyo adịghị mma nke ụmụaka, ọbụlagodi nkwenye. Ndị uwe ojii na-ele ya anya dị ka okwu nchekwa. Ọ bụrụ na a kọọrọ onye uwe ojii onye uwe ojii maka mmejọ mmekọahụ, ọ nwere ike imetụta atụmanya ọrụ ọzọ, ma wepụta onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ gụnyere iso ndị na-adịghị ike rụọ ọrụ.
Anyị na-enye atụmatụ nkuzi abụọ ebe a (maka ọnụahịa otu), otu maka obere ụlọ akwụkwọ nta na otu maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Onye ọ bụla n’ime ha nwere ihe ọmụmụ dị iche iche iji gosipụta mgbanwe nke ntozu okè. Ihe omumu a dabere na ezigbo ikpe ikpe ma gosiputa onodu ndi umu akwukwo nwere ike ihu onwe ha.
Ihe omumu ihe omumu banyere ndi nkuzi na enye otutu azịza na aro iji nyere umu akwukwo aka iche echiche ma tulee onodu ojoo ndia nke di na akwukwo ihe omumu. Ha na-ahapụ ụmụ akwụkwọ ka ha kparịta ụka n'okwu dị mma ma nyere aka wulite ume iji mee ihe na mpụga klaasị.
Ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọka iwu enyochaala iwu ahụ site n'aka ndị ọrụ Crown Prosecution Service for England na Wales, ndị Crown Office na Procurator Fiscal Service na nke Scottish Children's Reporter Administration na Scotland.
Mmekọahụ, Iwu & Gị, England
Mmekọahụ, Iwu & Gị, Wales
Mmekọahụ, Iwu & Gị, Scotland